Film sameeye caan ah una dhashay Iran ayaa waxaa dilay oo jarjaray waalidkiisa kadib markuu diiday in uu guursado! | HalQaran.com
Home Warar Xiiso Leh Film sameeye caan ah una dhashay Iran ayaa waxaa dilay oo jarjaray...
Film sameeye caan ah una dhashay Iran ayaa waxaa dilay oo jarjaray waalidkiisa kadib markuu diiday in uu guursado!
Babak Khorramdin oo ahaa film sameeye u dhashay Iran ayaa la sheegay in ay dileen waalidkiisa
Iran (Halqaran.com) – Babak Khorramdin oo ahaa film sameeye u dhashay Iran ayaa la sheegay in ay dileen waalidkiisa dilkaas oo lagu sheegay “Dil Sharafeed” kadib markii uu diiday in uu guursado.
47-jirkaan film sameeyaha ahaa kaasoo deganaa London ayaa meydkiisa oo jarjaran laga helay haamaha qashinka magaalada Ekbatan oo ku taalla Galbeedka Tehran.
Madaxa Maxkamadda Dembiyada ee Tehran Mohammad Shahriari ayaa sheegay in aabuhu uu qirtay inuu suuxiyay wiilkiisa ka hor inta uusan mindi ku dilin wuxuuna sheegay in uu jarjaray jirkiisa kadibna uu ku tuuray haamaha qashinka.
Babak ayaa sameeyay dhowr film waxaana kamid ah Crevice and Oath to Yashar kaasoo ka hadlayay wiil dhalinyaro ah oo u guuray London si uu u sii wato waxbarashadiisa kaasoo marka dambe usoo laabanaya qoyskiisa.
Film-kan ayaa ka sheekeenaya noloshiisa markuu u guuray London 2010-kii si uu u sii wato barashada habka loo sameeyo filimada.
Booliska oo baaraya arrintaan ayaa sheegay in caddeymo dheeri ah ay ka heleen guriga film sameeyahaan, iyadoo labada waalidba loo taxaabay xabsi ku aadan dambigan foosha xun, waxaana weli socda baaritaanno dheeri ah.